laacibfm.com » Laba Qof Oo Ka Tirsan Kooxda Barcelona Oo Laga Helay Caabuqa Coronavirus
Laba Qof Oo Ka Tirsan Kooxda Barcelona Oo Laga Helay Caabuqa Coronavirus
Laba qof oo ka mid ah kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la sheegay in laga helay xanuunka Coronavirus, kuwaas oo lagu daaweynayo cusbitaal.
Sida uu qoray wargeyska La Vanguardia oo ka mid ah wargeysyada ugu caansan dalkaas ee luuqadda Spanish-ka kusoo baxa, Madaxii kooxda dhakhaatiirta ee naadiga Barcelona, Ramon Canal ayaa laga helay xanuunka Coronavirus, sidoo kalena waxa uu ku dhacay kaaliyihiisii u qaabilsanaa dhinaca naadiga kubadda gacanta oo lagu magacaabo Josep Antoni Gutierrez.
Labadan qofba waxa la sheegay in la dhigay cusbitaal oo ay soo kabanayaan, laakiin waxa jira walaac gudaha kooxda ah oo tilmaamaya inay suurtogal tahay in labadan dhakhtar ay dhowaanahan la kulmeen ciyaartoyda naadiga.
Inkasta oo kooxda koowaad aanay tababar samaynin intii ka dambaysay March 13 oo ay ciyaartoydu ku jirana guryahooda, haddana waxa jira walaac kooxda gudaheeda ah, waxaana si joogto ah loo kor joogayn doonaa ciyaartoyga oo si dhow loola soconayo si haddii ay soo baxaan kuwo ay dhakhaatiirtani la kulmeen gargaar loogu fidiyo.
Dhinaca kale, Barcelona waxa saamayn dhaqaale ku yeeshay caabuqa Coronavirus, waxaana ay ciyaartoygeeda ka dalbatay inay mushahar dhimis 70% ah sameeyaan, si burbur dhaqaale aanay kooxdu u gelin.
Ciyaartoyga ayaa la sheegay inay diideen dalabka kooxda, iyagoo u sheegay in laacibiin aan tayo badan lahayn iyo saxeexyo aan waxba taraynin ay ku bixiso lacago badan, halka ay kuwii muhiimka ahaana u sheegayso inay mushahar dhimis sameeyaan.